Ngaba ufuna igqwetha? Unxibelelwano Law & More B.V.
Umthetho wokufudukela kwelinye ilizwe ulawula imicimbi enxulumene nokwamkelwa, ukuhlala kunye nokugxothwa kwabaphambukeli. Abantu bamanye amazwe ngabantu abangengobemi baseDatshi. Aba bantu banokuba ziimbacu, kodwa namalungu osapho lwabantu esele ehlala eNetherlands. Basenokuba ngabantu abafuna ukuza kusebenza eNetherlands.
KUFUNEKA KUFUNA UMTHETHO WEMIGAQO?
FUMANA UNXIBELELWANO NO LAW & MORE
> Ukufaka isicelo semvume yokuhlala
> Ukufaka isicelo sobuzwe bamaDatshi
> Ukumanyaniswa kwakhona kosapho
> Ukufuduka kwabasebenzi
> Umfuduki onobuchule obukhulu
Abameli bethu bokufika baya kukuvuyela ukukunceda ukuba ufuna ukungenisa imvume yokuhlala okanye isicelo sendalo, iqabane lakho, ilungu losapho okanye umsebenzi. Law & More inokukucebisa okanye inokukufumanela isicelo sephepha-mvume lokuhlala sonke. Ukuba isicelo sakhoaliwe Unawo umbuzo omnye wabameli bethu bokufika? Ukuba kunjalo, ngokuqinisekileyo siya kukuvuyela ukukunceda.
Imizekelo yezifundo esingakunceda ngayo zezi:
• Ubume bendalo;
• Ukumanyaniswa kwakhona kosapho;
• Abafuduki abanezakhono eziphezulu.
intlanganiso, isicwangciso esicacileyo
Ukufaka isicelo semvume yokuhlala
Iipemethe zokuhlala zibandakanya zonke iimvume zokuhlala ngaphandle kwemvume zokuhlala indawo yokuhlala. I-IND isebenza ngomgaqo-nkqubo wokwamkelwa kwabafundi. Isicelo semvume yokuhlala saliwe nje yi-IND ukuba iimeko akuhlangani nazo. Abameli bethu bokufika banamava okufaka izicelo zeentlobo ezahlukeneyo zemvume yokuhlala. Sinokufaka izicelo zezi mvume zokuhlala zilandelayo:
Iphepha mvume yokuhlala kwakhona;
Iphepha-mvume lokuhlala ngokwakho
Imvume yokuhlala ngumhlali wase-EU;
Imvume yokuhlala umntu onobuchule bokufuduka;
Imvume yokufunda / yokukhangela;
Imvume yokuhlala ixesha elingasasebenzi;
Iphepha mvume lokuhlala ngokuqhubekekayo;
Ugunyaziso lokuhlala okwethutyana (MVV).
Abameli bethu bokufika bakulungele
Ngaba ungathanda ukuhlala eNetherlands?
Ukumanyaniswa kwakhona kosapho
Ngaba awukho kunye nosapho lwakho okanye ngaba usapho lwakho alukho kuwe? Fumanisa ukuba singakwenzela ntoni na
Ngaba uyafuna ukusebenza kwaye uhlala eNetherlands? Sinokucwangcisa yonke inkqubo yesicelo
Umfuduki onobuchule obukhulu
Ngaba ufuna ukuba umsebenzi welinye ilizwe asebenze ngokusemthethweni eNetherlands? Nxibelelana
Ukufaka isicelo sobuzwe bamaDatshi
Ukuba unqwenela ukufaka isicelo sobuzwe baseDatshi, kufuneka kungeniswe isicelo sendalo. Kumaxesha amaninzi kunzima ukuzigweba ngokwakho ukuba uyakufanelekela ukwenza izinto zendalo. Uncedo lwegqwetha elilungileyo lokufuduka libalulekile, kuba iimeko zihlala zinzima kakhulu. Ukunyameka kwinkqubo yesicelo sendalo kubalulekile kwisicelo esiyimpumelelo. Ngaba ufuna uncedo lokufaka isicelo sobuzwe bamaDatshi? Law & More Ukubonelela ngoncedo olufanelekileyo kwaye bayakuxhasa kuyo yonke inkqubo. .
Iimeko ezingqongqo ziyasebenza ekudityanisweni kosapho kwakhona. Ukuba imeko ayifezekanga, isicelo siyakwaliwa. La malungu alusapho alandelayo afanelekile ukuba abe yinxalenye yosapho kwakhona.
• iqabane elingatshatanga;
• abantwana abancinci.
Enye yeemeko zokudityaniswa kwakhona kosapho kukuba umenzi-sicelo kunye nelungu losapho bobabini kufuneka babe nobudala bungama-21. Ukongeza kumaqabane omtshato, amaqabane abhalisiweyo, amaqabane angatshatanga kunye nabantwana abancinci, amaqabane abelana ngesondo (abangatshatanga) nabo banelungelo lokuphinda bahlangane.
Ngaba ungathanda ukuza eNetherlands ukuze usebenze apha njengomntu onobuchule bokufuduka, umntu oziqeshileyo okanye oza kuhlala apha ixesha nje elifutshane kunye nevisa yeshishini? Abameli bethu bokufika bacebise bobabini abasebenzi kunye nabaqeshi malunga nezinto ezinokubakho kwaye babakhokele kwinkqubo yokwenza isicelo.
Enye yeendlela ezilungileyo zokuvumela umsebenzi welinye ilizwe ukuba uhlale kwaye usebenze ngokusemthethweni eNetherlands kukufaka isicelo semvume yokuhlala njengomhambi onobuchule kakhulu. Kwimeko enjalo, imvume yokusebenza ayifuneki. Umbandela, nangona kunjalo, kukuba umqeshi ubhaliswe eNetherlands njengomxhasi ovunyiweyo kunye ne-IND. Ukongeza, kubalulekile ukuba umfuduki onobuchule ahlangabezane nemfuno ethile yengeniso. Iqela lethu lamagqwetha abafudukayo banokukunceda kwaye sinokungenisa isicelo egameni lakho kwi-IND. Ngaba ungayithanda le nto? Nceda unxibelelane Law & More.